Vista's Colorful Planet: 2010
Labels: Story;ဘာသာပြန် 13 comments | Links to this post
ဒါဘာလည်း အနီးကပ်ဆိုရေခဲမုန့် လိုလိုပဲ။
Wasabi prawn တဲ့။
ပုစွန်ကြော်ကို ဝါဆာဘိ အနှစ်ဆမ်းထားတာ ၊ မဆိုးပါဘူး ။
ကျနော် Wasabi မကြိုက်တာတောင်စားလို့ ရတယ်။
ဒါက အဝေးကပ်ရိုက်ချက် ။
ငါးမန်းတောင် ဖက်ထုပ်ဟင်းချိုဆိုပဲ။ ငါးမန်းတောင် အသားရှာဖို့ ဦးစံရှား ရဲ့ မှန်ဘီလူးလိုတယ်။
ဝက်သား+ ကောင်ညင်း + မှို ( ဟင်း နာမည်မမှတ်ထားမိ )။
စားလို့ တော့တော်တော်ကောင်း ၊ ကောက်ညှင်းမကြိုက်တဲ့ ကျနော်တောင်စားတယ် ။
စားပြီးတော့ ကမ်းနားထိုင် ၊ ဟိုငေး ဒီငေး။
ဟိုပြော ဒီပြော ။
လက်ကမနေ နိုင် ၊ ကင်မရာ မပါ ပေမယ့် ဖုန်းနဲ့ ရိုက်။
ကမ်းနားမှာ သီချင်းဆိုတာ နားထောင် ။
အဲဒီ တစ်ဖွဲ့ လုံးအရမ်းတော်ကြပါတယ် ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ၊ လေဒီဂါဂါ ၊ အက်ဘာ ၊ ဂျက်စတင် တင်းဘာလိတ် ၊ ဟဲဗီး
သီချင်းတွေ အကုန်ဆိုတာ ဆက်တိုက် ။
သူတို့ တီးဝိုင်းနားထောင်ပြီးတော့ ကမ်းနား မှာ ပြန်ထိုင် ၊ မှောင်တော့မှ နှစ်ယောက်သားပြန်လာကြ။
စနေနေ့ ည ခရီးစဉ်ဤတွင်ပြီးပါပြီ။
Labels: About me, Foods7comments | Links to this post
IBM Engineer ဆီက Report ယူ ၊ လက်မှတ်ထိုး ၊ သူ့ ကို တံခါးဝလိုက်ပို့ ၊
နုတ်ဆက် အပြီး မှာမှ နာရီကြည့်မိသည်။ ညနေ ၇ နာရီခွဲ။
IBM က Teo က ဒီကိုလာနေကြမို့ ဓါတ်လှေကားနားအထိလိုက်ပို့ ရန်မလို ။ သူ ဘာသာသွားတတ်သည်။ Server Room ထဲမှာက power supply လာ လဲသူများကျန်သေးသည် ။
ပြဿနာဆိုတာ တစ်ခုတည်းမလာဘူးဆိုတဲ့စကားပုံများတော့ သိပ်မှန်။
ဒီ System က ဒါဖြစ်ပြီဆို ၊ နောက် တစ်ခုကလည်း ဖြစ်သေးတာ။
အနည်းဆုံး ၂ ခုလောက်မှ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ။ power supply သမားတွေပြန်သွားတော့ ၈ နာရီနီးပါး။
ကျနော့်မှာ အဲဒီတော့မှ ခုံမှာခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်မိသည်။
မောတာ ၊ မနက်စာ breakfast တောင်မှ မစားရသေး ခုဟာက ညစာအချိန်တောင်လွန်တော့မယ် ။
သိမ်းစရာတွေ သိမ်း အပြီး ၊ ပြန်ခါနီးမှာ Server Rack တွေ သော့ခတ်
ဖို့ အသွား ၊ တွေ့ လိုက်ရတာတစ်ခုကြောင့် မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားသည်။
ကျနော် တို့ Server Room ရဲ့ အတွင်း မှာ နောက်ထပ် တစ်ခန်းရှိသေးသည်။
အဲ အခန်းကို ကျနော်တို့ အခန်းက နေ ဖြတ်ပြီးမှ ဝင်သွားရသည်။
အဲအခန်းမှာ Francis တစ်ယောက်ပဲ သူ့ စက်တွေနဲ့ နေလေ့ရှိသည် ။
ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှလည်း တံခါးပိတ်လေ့မရှိ ။
ကျနော်တို့ အခန်းအတွင်းက အခန်းလို ဖြစ်နေတာမို့တံခါးပိတ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းလိုင်းမမိတော့လို့ လေ။
ဒါပေမယ့် ခုတွေ့ လိုက်တာက အဲဒီ တံခါးက ပိတ်ရက်သား ပြီးတော့ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ။
ကိုယ်တိုင် က ဗန္ဓုလသွေးပါ သူမို့သတ္တိကကောင်းပြီးသား။
မျက်လုံး ပြူးသွား ပြီး စစ ချင်းခေါင်းထဲ ဝင်လာတဲ့ အတွေးက အရင် Security ဦးလေးကြီးပြောဖူးတဲ့ ၊
နင်တို့ level မှာ သရဲ ရှိတယ် ဆိုတာပဲ။ နောက်တော့ ရွတ်ဖတ် ပြီးမောင်းထုတ်ရတယ် ဆိုလားတဲ့ ။
ဒါပေမယ့် တံခါး တလှုပ်လှုပ်နဲ့ က မရပ် တာ မို့အရဲစွန့်သွား card နဲ့ ကပ် ခါ ဖွင့်လိုက်တော့ ၊
တစ်မျက်နှာလုံး ရဲရဲ နီနေပြီး တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေသော အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်။
ထိုအမျိုးသမီးလေး ပြောလိုက်တာက အထွေးထွေးအရောရော
“ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင် ၊ ဖုန်းလည်း လိုင်းမမိဘူး“ တဲ့။
ကြိုးပျောက် ဂါဝန် အနက် ခပ်တိုတို အပေါ်မှာ ပဝါ အနက်ပါးပါးလေး ပတ်လို့ ၊ ၆ လက်မ နီးပါးမြင့်သော ထိပ်ချွန်ဒေါက်မြင့် ၊ ထို ဝတ်စားပုံ အရ ဒီရုံးကို တစ်ခါမှ မလာဖူးသူဟုသတ်မှတ်လိုက်သည်။
အမျိုးသမီးလေးက သူမနောက်ကလိုက်ထွက်အလာမှာ ထိပ်ချွန်ဒေါက်မြင့်က
အောက်က Raised Floor အပေါက်ကြားမှာညပ်နေပြန်လို့ ထုပ်ရပြန်သည်။
သူမကို ထိုင်ခိုင်းပြီး စိတ်အေးအေးထား ခိုင်းရသည်။
ဖုန်းတစ်ခါ နှစ်ခါ ခေါ်အပြီးမှာမှ ဇတ်လမ်းက ရှင်းတော့တာ။
သူမက အပေါ်ထပ် က Server Room မှာ ထိုင် တဲ့ ပြင်သစ် Francis ထံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ လာသူ။
ပရိုဂရမ်မာ။အောက်က Security အသစ်က က သူမပြောတဲ့ Francis ကို ၊
ကျနော်တို့ အထပ်က စလုံး Francis နဲ့ မှားပြီး လိုက်ပို့ ပေးလိုက်တာ။
တစ်ကယ်က ပြင်သစ်လိုက ဖရွန်ဆီ လိုမျိုးဆန်ဆန် အသံထွက်တာပါ ။
English လို ဆိုတော့ ဖရန့် စစ် ဆို တူတူ ဖြစ်နေတာ မို့Security က လည်း တစ်ယောက်ထဲပဲမှတ်တော့တာ။ သူမတို့ကျနော့်နားက ဖြတ်ပြီး ဝင်သွားတာ ကို အဲဒီတော့မှ ပြန်မှတ်မိလာသည်။
အလုပ်ရှုပ်နေတာမို့ မျက်လုံးထောင့်က မြင်လိုက်ပေမယ့် အမှတ်မထင်။
အပေါ်ထပ်က Francis က ကျနော့်လိုပဲ နောက်ကျလာ နောက်ကျပြန်သူ ။
ကျနော်တို့အထပ်က Francis က ၈ ဆို လာ ၅ နာရီ တိတိဆိုပြန်သူ။ သူမလာတော့ ၆နာရီ မို့ မရှိတော့ ။ Security က လည်း အသစ်ဆိုတော့ မသိ ၊ ဒီမှာ ထိုင်လေ့ရှိတယ် စောင့်နေပါဆို ထားပစ်ခဲ့တာ။
တစ်ကယ်က အဲလို ဧည့်သည်ကို အထဲသို့မပို့ ရ ။
ဧည့်ခန်းမှာပဲ နေစေရတာ ။နောက်နေ့ မှာပြဿနာကြီးကျယ် ဖြစ်သွားသေးတယ်။
သူမက စောင့်နေ မလာတဲ့အဆုံးဖုန်းဆက်မယ်ဆို ဖုန်းထုတ်တော့ မမိ ။
တံခါးကို ထုနေတာ လည်းအတော်ကြာပြီတဲ့၊
ကျနော်တို့ ကလည်း အလုပ်များနေတော့ မကြားကြဘူးလေ။
နောက်ဆုံး အကုန်ပြန်လို့တစ်ယောက်တည်း ကျန်တော့မှတောင် တံခါးလှုပ်တာမြင်လို့။
တံခါးက အထူကြီးတွေ မို့ သူမထုနေတာလည်း အသံမကြား ၊ လှုပ်ရုံလေးပဲရှိတာ ။
ကျနော်သာမတွေ့ ရင် မနက် ထိ အဲဒီအခန်းထဲမှာ နေရမယ့် သူမဘဝ မတွေးရဲပါတဲ့ ။
ဝတ်စားထားတဲ့ ပုံနဲ့အအေးပတ် ပြီးသေမလား လေ ဖြတ်မလားပဲ ။
ကျနော့်ကလည်းအဲဒီနေ့ ကအလုပ်များလို့ ၊ ပုံမှန်ဆို အဲဒီအခန်းထောင့်လည်းမရောက် ၊
၆ နာရီ ကျော်ဆိုပြန်နေပြီ။
နောက်တော့ တုန်ရီရီ သူမကို ဓါတ်လှေကား အထိ လိုက်ပို့ ပြီး အိမ်ပြန်တော့ ၉ နာရီနီးပါးရှိနေပါပေါ့လား။
Labels: About me, Miscellaneous 13 comments | Links to this post
အဖျား ၊ အနား
ဖျားခါနီးလို့ နားလိုက်တယ်၊ အနားရပြီဆိုမှ ဖျားတော့တယ်း)။
ဒီတစ်လမှာတော့ ပင်ပန်းတာ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုကိုပဲ ..မနားရဘူး ။
ပြီးတော့ကိုယ်က on call တာဝန်ယူရတဲ့လ ။ ပိတ်ရက်လည်း အရေးကြီးရင်ပြန်သွားရသေးတယ်။
Sunday တောင်ညကြီး အလုပ်ပြန်သွားရသေးတယ်။ ညမအိပ်ရတာလည်း ရက်ဆက်နေတော့ ၊ နိုးပြီးရင်ပြန်မအိပ်တတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်ကဆို ပြဿနာမရှိဘူး on call လည်းအေးဆေးပဲ။
ဖုန်းလာလို့ ပြောဆိုရှင်းလင်းပြီးတာနဲ့ ပြန်အိပ်တာပဲ။
ခုက မအိပ်ရတာများတော့ ဖုန်းပြောပြီးရင် ပြန်အိပ်မပျော်တော့ဘူး ၊ မျက်စိကအကြောင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ပြန်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ မိုးလင်းခါနီးတော့ အိပ်ချင်သလိုဖြစ် ၊ နောက်တစ်call ဝင်လာပြန် သေရော ။
ဒီလိုနဲ့၂ ပတ်လောက်ဆိုတော့မနေနိုင်တော့ဘူး ။
မနက်အလုပ်ကလည်းမသွားလို့ မရဘူး ။ အရေးကြီးနေတာကိုး။
စိတ်ကလည်း ပင်ပန်းသေး ။လူပင်ပန်းတာတော်သေးတယ် ၊ စိတ်ပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး။
ကျနော်က customer office မှာနေရတဲ့လူ ၊ အကုန်လုံးနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းပါတယ် အဆင်လည်းပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း တခြားဌာနကနေ ကျနော်တာဝန်ယူရတဲ့ဘက်ကို အသစ်ပြောင်း
လာတဲ့ သူက လူညစ်။ သူက ရစ်သလားမမေးနဲ့၊ ဒါလုပ်နေ ဟိုဟာရော မပြီးသေးဘူးလား ။
အရေးကြီးတာတွေလုပ်နေရလို့ညမအိပ်ရတာ အိပ်ရတာ သူဂရုမစိုက်ဘူး ။
သူ့ ရဲ့ အရေးသိပ်မကြီးတဲ့ backup တို့၊ ဗိုင်းရပ်စ် update တို့နည်းနည်းနောက်ကျလို့ မရဘူး။
paper work တွေလည်း လုပ်ခိုင်းသေးတယ် ၊ အရေးမပါတာတွေ ။ ဘယ်တေ့ာတင်တင်ရတဲ့ဟာတွေကို။
ကျနော့် ကိုများပြောဖို့ လိုက်ကြည့်နေသလားမှတ်ရတယ် ။ သူကလည်း စိတ်ဒုက္ခပေးတာတစ်မျိုး။
စိတ်မထင်ရင် ကျနော့်မန်နေဂျာသွားတိုင်သေးတယ် ။
( လေပါဒယ် )
ကျနော့်မန်နေဂျာက အရမ်းကောင်းတာ သူ့ တပည့်တွေ ဆိုရင်ဝယ်သား ဆိုသလိုပဲ ။
ကျနော် အရမ်းပင်ပန်းနေပြီဆိုတာသိလို့့မန်နေဂျာက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို on call လွှဲပေးလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ပတ်မှာမှ ကျနော်ပြန်ယူမယ် ။
တစ်ယောက်ကို အလုပ်မှာ လာကူခိုင်းတယ် ။
နည်းနည်း အနားရတာပေါ့လေ ၊ အနားလည်းရရော ဖျားတော့တာပဲး)။
ဖျားတော့မှ အိပ်ရတော့တယ်။ ဆေးသောက်အိပ်လိုက်တာ တစ်ချိုးတည်း။ ကောင်းမှကောင်းပါလား ဖျားရတာ။
(ဒီလိုလေး အိပ်ရတယ် )
Labels: About me9comments | Links to this post
အများသိပြီးသား Sky Park ကိုသွားခဲ့တဲ့ ပုံတွေပါ ။
တီဆွိ ကသေချာတင်ထားတာမို့ကျန်တာတွေမပြောတော့ဘူးနော်။
ပုံတွေလည်းတီဆွိနဲ့ မတူတာတွေပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော့် လိုဓါတ်ပုံရိုက်ချင်သူများအတွက်တော့ တစ်ယောက် ၂၀ တန်ပါတယ်။
ကိုကို့ လို လေသလပ်ခံလိုသူများအတွက်လည်း တန်တာပေါ့လေ ။
ကျနော်က အပေါ်မရောက်ခင်ရော ၊ ရောက်ပြီးတော့ရော တစ်ချိန်လုံး ဓါတ်ပုံရိုက်နေပါတယ် ၊
လူတွေအများကြီးပါ တစ်ယောက် ၂၀ နဲ့တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကိုမနည်းရမှာပါ။
တစ်ကယ့်ကိုနေလို့ လည်းကောင်းတဲ့ နေရာပါ။အကြာကြီးကို နေခဲ့ပါတယ် ညအထိပေါ့
( တန်အောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး .. ဟမ် ) ။
ဓါတ်ပုံ အလှရိုက်လိုသူများကတော့ သုံးချောင်းထောက်အရှည်ယူသွားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
မဟုတ်ရင် သိပ်အဆင်မပြေဘူး ၊
မှန်အပြင်ဘက်ကိုကင်မရာ ထုတ်ရိုက်ရတာမို့ ဘယ်လိုထိမ်းပေမယ့် ၊လက်တုန်ပါတယ် ။း)
ဒါတွေက ပုံအများကြီးထဲကမှ နည်းနည်းကောင်းတာရွေးထားတာပါ။
ကောင်မလေးတွေ ရေကူးတာ စောင့်နေပါသေးတယ်၊ သိလို့ လားမသိဘူး။
ဘယ်သူမှမကူးလာဘူး အဲလူဝတုတ်ကြီးပဲကူးနေတယ် ။ စိတ်မဆိုးကြနဲ့ နော် ။း)
ဟော်တယ် မှာလာတည်းသူတွေပဲ ကူးရတယ့်နေရာပေမယ့် ကျနော်တော့ မကြိုက်ပါဘူး privacy မရှိဘူး ။
လူပေါင်းစုံလာပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့ နေရာကြီးကို။
အဲဒီပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေရေးရှိပါတယ် ။ အဲဒီအဖွဲ့ က အဆိုတော်မလေးပါ ။
ဒါက အောက်ထပ်က Shopping center ထဲက ဖျော်ဖြေရေး တယောအဖွဲ့ ပါ။
လူလေးတွေချောသလို ဂီတကလည်း နားထောင်လို့အင်မတန်သာယာပါတယ်။
ကောက်ကလိမ်လမ်းနဲ့Sky Park ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ရင်ရရဲ့ သားနဲ့း)
Labels: About me, Miscellaneous 10 comments | Links to this post
Many people don’t understand how deep the pain of losingapet is.
The pain can be quite unbearable.
Do you know someone who lostapet?
My friend Steve recently lost his beloved cat and he felt totally lost .
This post is dedicated to him and all the animal lovers who consider their pets as their family members and not just asapet.
If you have lostapet and people around you cannot understand how you feel and that is more difficult for you.
The people who cant understand will keep asking you like , ‘ Why don’t you go and get another ? or
“ Oh , its beenamonth already!
(Just another saying that, c’mon you ‘v got to stop mourning, its enough “.)
For those people, please pity to them cause they never had the kind of strong bond that you had with your pet.
They have no idea what kind of losers are they as they never felt the beautiful love?
But believe me, there are others who can understand you.
But for the people who are trying to help your friend who lost his or her pets, I have some suggestions.
Never ever ask them to get another one.
If someone lost their family members, did you ever ask them to find another one?
I believed nobody suggest to like that. Just like human being, our pets are individuals to us. They may be the same for the other people, but actually they have totally different personalities of their own. They are not like another cats or dogs.
We cannot substitute them in our life. So never ever suggest them to get another one.
Let them talk about their pets.
Just listen to their sweet memories even if you didn’t know their pets.
Share the join and pain with them if they what to share with you.
Don’t tell them its enough.
For us, losingapet is just like losing the family members.
We keep on walking, living but we cannot stop missing them.
Inside our home we can still feel their figures, voices and all.
What person is always happy to see you always, no matter what?
Our pets don’t care how we look or how you dressed.
They don’t care we are poor or rich .
They always want nothing but our happiness.
They always tried to cheer us up .
Every time you come home you can feel the great joy when you see their greetings.
Our furry companions never leave us.
They always depend on us for the care and give back their love to us.
They repay our cares to them with their precious love.
Of course you can get another pet but can’t replace the other.
Never ashamed to grief the lost of your beloved pet .
No matter how long it will take. Go ahead and grief.
Give yourself enough time to grief.
It may take youayear to overcome but who to care?
It’s because you love your pet.
Because losingalove one is never been easy, it can beahuman or canine or feline or whatever. It will always be so difficult.
You need to stay around with the people who can understand you and try to cure your emotional pain which can be worse than physical pain. You will get over it, but don’t set the time for it.
Try to go on and eventually you will get over it.
Labels: Miscellaneous;Pets 10 comments | Links to this post
Lasagna ( lasagne)
Yaki Udon (Japanese Stir-Fried Udon )
Labels: About me, Foods6comments | Links to this post